पोषण Archives – healthykhabar.com
कोरोनाबाट गर्भवती महिलाको मृत्यु
काठमाडौं,६ कार्तिक । चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालमा ३३ वर्षीया कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। तनहुँ जिल्ला शुक्लगण्डकी नगरपालिका घर भई हाल मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा ५ बस्ने ३३ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको हो। निमोनिया र श्वासप्रश्वासमा समस्या आएर बिहीबार बिहान ६ः१५ मा मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। उहाँ संक्रमण सहित खोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या भई असोज ३० गते अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियोे । उहाँ ३७ हप्ताकी गर्भवती हुनुहुन्छ।
समयमा उपचार गने निको हुन्छ स्तन क्यान्सर
काठमाडौँ, २५ असोज । नेपालमा प्रत्येक २२ जना महिलामा एक जनालाईलाई स्तन क्यान्सर हुन गरेको पाइएको छ । सरकारसंग आधिकारिक तथ्यांक नभएपनि अहिले प्रत्येक २२ जना महिलामध्ये एक जनालाई स्तन क्यान्सर हुने गरेको चिकित्सकले बताएका छन । उनीहरुले नेपालमा नै स्तन क्यान्सरको राम्रो उपचार सम्भव पनि भएको बताएका छन । पुरुषमा एक प्रतिशत स्तन क्यान्सर हुने गरेको छ । नेपाल क्यान्सर अस्पतालका स्तन रोग विशेषज्ञ डा प्रफुल्ल शाक्यले नेपालमा स्तन क्यान्सरको राम्रो उपचार भएको बताए । उहाँले स्तन क्यान्सर भएर विरलै महिलाको निधन हुने जानकारी दिए । उनले नेपालमा ७० प्रतिशत महिलाको स्तन बचाएर नै शल्यक्रिया गर्ने गरेको बताए । यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका क्यान्सर रोग विशषेज्ञ डा.अरुण शाहीले स्तन क्यान्सरको समयमा नै पहिचा गरेर उपचार गरे निको हुने बताए । उनले अहिले नेपालमा क्यान्सरबारे जनचेतना आइसकेकोले स्तन क्यान्सरको उपचार गर्न हिच्किाउने नगरेको बताए । उनले स्तन क्यान्सरको चाँडै उपचार नगर्ने हो भने फोक्सो, हड्डी र घाँटीमा असर पार्ने…
चम्पादेवी गाउँपालिकास्थित घोराखोरी स्वास्थ्य चौकी अब पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था
ओखलढुंगा । ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिकास्थित घोराखोरीमा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिएको छ । चम्पादेवी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले स्वास्थ्य चौकीलाई पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरेको हो । चम्पादेवि गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीले पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्थाका लागि चाहिने मापदण्ड घोराखोरी स्वास्थ्य चौकीले पुरा गरेकोले स्वास्थ्य चौकीलाई पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षहरुमा अन्य स्वास्थ्यचौकी संस्थाहरूलाई पोषणमैत्री घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य चौकीमा नियमित बच्चाको वृद्धि अनुगमन गरेको, आइरन चक्की खाएका महिला, सुत्केरी पछि आइरन र भिटामिन ए खाएका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने पोषण रजिष्टरमा पोषण सम्बन्धी सबै सुचना रेकर्ड राखिएको, पुर्ण स्तनपान गराउने, पोषण सम्बन्धी औषधि र सामग्री पुर्ण रहेको, जुकाको औषधि खाएको कुपोषित बालबालिका नरहेको, ६ महिनापछि दूधसहित अन्य पौष्टिकको मापदण्ड अनुसार आहार खुवाएको सुनिश्चित भएको, विद्यालय स्वास्थ्य पोषण अन्तर्गत जुकाको औषधि खाएको, स्वास्थ्य संस्थामा पोषण कर्नर र आम र शिशुलाई नियमित परामर्श गरिएको साथै तथ्यांक चुस्त दुरुस्त राखिएकोलगायतका सुचक पुरा गरेपछि स्वास्थ्य चौकीलाई…
विराटनगर १४ साउन । विराटनगर महानगरपालिका वडा नं–३ निवासी १०१ वर्षीय नारायणप्रसाद रेग्मीलाई रु १२ हजार प्रदान गरी आजदेखि पोषण भत्ता अभियान शुभारम्भ गरिएको छ। महानगर प्रमुख भीम पराजुली र वडाध्यक्ष विनोद बस्नेतले ज्येष्ठ नागरिक रेग्मीको घरमै गई उक्त रकम उपलब्ध गराउनाका साथै सँगै गएका चिकित्सकले उनको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरेका थिए। यसैगरी वडा नं ३ निवासी ९३ वर्षीय कृष्णकुमार न्यौपानेको घरमै पुगेर रु १२ हजार भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । महानगरपालिकाले ८४ वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषण भत्ताबापत मासिक रु एक हजार उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार एकमुष्ट रु १२ हजार प्रदान गरेकोे हो। महानगरप्रमुख पराजुलीले ८४ वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिक देवतातुल्य भएकाले उनीहरुको दर्शन र आशीर्वाद लिन घरदैलोमा पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने अभियान शुरु गरिएको बताए। चाँडै नै निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरी ८४ वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क चस्मा उपलब्ध गराउनाका साथै एक चिकित्सकलाई घरदैलोमै पुर्‍याएर स्वास्थ्य जाँच गरिने जानकारी दिँदै उनले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लट्ठी र टर्चलाइटसमेत…
बिभिन्न उमेर समुहका शिशुहरुलाई कस्तो खाना खुवाउने ?
६ महिना पुरा भएका शिशुलाई दिनको २ पटक नियमित स्तनपानका अतिरिक्त पोषिलो पिठोको लिटो, नरम खिर, बिभिन्न तरकारी मिसाएर बनाएको जाउलो,रामरी मिचेको वा पिसेको सागपात,तरकारी (मौसम अनुसारका तरकारी,आलु सखरखण्ड,पिडालु ईत्यादी), मासु, फलफुल खुवाउनुपर्छ । एक पटकमा ठुलो चम्चाको २ वा तिन चम्चा खुवाउनुपर्दछ । ७ देखी ८ महिनाका शिशुलाई दिनको ३ पटक नियमित स्तनपानका अतिरिक्त पोषिलो पिठोको लिटो, नरम खिर,बिभिन्न तरकारी मिसाएर बनाएको जाउलो ,रामरी मिचेको वा पिसेको सागपात,तरकारी (मौसम अनुसारका तरकारी,आलु सखरखण्ड,पिडालु ईत्यादी), मासु, फलफुल खुवाउनुपर्छ । एक पटकमा ठुलो चम्चाको ४ देखी ६ चम्चा खुवाउनुपर्दछ । ९ देखी ११ महिनाका शिशुलाई दिनमा ३ पटक नियमित स्तनपानका अतिरिक्त १ पटक बिचमा खाना खुवाउनुपर्छ । १२ देखी २४ महिना सम्मका बालबालिकालाई दिनको ३ पटक पारीवारीक खाना खुवाउनुपर्छ । पुरक खानामा घिउ,तृल,मह,चिनी आदी मिसाएर यसलाई अझ पोषिलो बनाउन सकिन्छ । यदी बालबालिकाहरुमा शीघ्र कुपोषण वा विशेष कडा कुपोषण भएको छ भने उनीहरुको उपचार स्वरुप तयारी उपचारात्मक खाना खान दिनुपर्छ । (बालचिकित्सक…
कर्णालीका बालबालिकाका लागि किनिएको पिठोमा ‘भिटामिन ए’ नै छैन
काठमाडौं, ९ साउन । सरकारले कर्णालीका पाँच जिल्लामा वितरण गर्न किनेको पोसिलो पिठो गुणस्तरहीन पाइएको छ । दुई वर्षसम्मका बालबालिका र गर्भवतीलाई वितरण गरिने पिठोमा भिटामिन ए नभएको परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ । पोसिलो पिठोमा अत्यावश्यक तत्व नै नभएपछि अहिले वितरणमा रोक लगाइएको परिवार कल्याण महाशाखाका पोषण प्रमुख केदार पराजुलीले बताए । विश्व खाद्य कार्यक्रमले गुणस्तर मापन गर्दा भिटामिन ए नपाइएको उनले जानकारी दिए । यसैकारण केही महिनाका लागि पौष्टिक पिठो वितरण कार्यक्रम स्थगित हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले कुपोषण उच्च रहेको कर्णालीका पाँच जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा २० तथा सोलुखुम्बुमा १० वर्षदेखि पोसिलो पिठो वितरण गर्दै आएको छ । यसका लागि सरकारले गत वर्ष आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ६ जिल्लाका लागि विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा पठाएको थियो । पछि त्यो रकम परिवार कल्याण महाशाखाले फिर्ता गराएको थियो । शारदा ग्रुपले बनाएको पिठो गुणस्तरहीन प्रदेश सरकारले पिठो किनिदिन आग्रह गरेपछि तत्कालीन आपूर्ति महाशाखा (हाल व्यवस्थापन महाशाखा)ले कर्णालीका लागि…
बजारमा आयो साङ्लोको दुध, गाई,भैंसीको भन्दा तीन गुणा बढी पौस्टिक
बजारमा साङ्लोको दुधलाई अनुसन्धानकर्ताले ‘सुपरफुड’ को सूचीमा समावेश गरेका छन् । साङ्लाले आफ्नो भ्रुणलाई ख्वाउनका लागि जुन ‘मिल्क क्रिस्टल’ उत्पादन गर्छन् त्यसमा अत्यधिक पौष्टिक तत्व पाइने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ । डेरी प्रोडक्टको एलर्जी हुनेहरुका लागि यो राम्रो विकल्प हुनसक्ने इन्डिपेन्ड डट को डट युकेले बताएको छ । इन्स्टिच्युट फर स्टिम सेल बायोलोजी र रिजेनेरेटिभ मेडिसिन, भारत, का अनुसार साङ्लाले आफ्नो भ्रुणलाई पोषण दिनका लागि उत्पादन गर्ने ‘दुध’ मानिसहरुले पनि पिउन सक्नेछन् । जर्नल अफ द इन्टरनेशनल युनियन क्रिस्ट्यालोग्राफीका अनुसार डिप्लोप्टेरा पंकटाटा भनिने प्यासिफिक बिटल कक्रोचको दुधमा पौष्टिक तत्वको खानी भएको वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् । ‘क्रिस्टलको रुपमा उत्पादन गरिने साङ्लाको दुध एक पूर्ण आहारजस्तै हो । यसमा प्रोटिन, फ्याट र सुगर पाइने एक अनुसन्धानकर्ता स्यानचारी ब्यानर्जीले टाइम्स अफ इन्डियालाई जानकारी दिइन् । साङ्लोको दुध बनाउन सजिलो भने छैन । दुध निकाल्ने क्रममा साङ्लोको मृत्यु हुने भएकाले, एक गिलास दुध बनाउनका लागि थुप्रै साङ्लोको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ । साउथ अफ्रिकाको…
- डा. नारायणबहादुर बस्नेत स्वस्थ शरीरका लागि स्वच्छ हावा, शुद्ध पानी तथा पोषणयुक्त खाना अनिवार्य हुन्छ । जन्मपछि तुरुन्त श्वासप्रश्वास सुरु हुन्छ भने केही घण्टामा नै खाना सुरु हुन्छ । मानिसलाई जन्मपश्चात् पूर्ण आयु रहँदासम्म सन्तुलित आहार आवश्यक हुन्छ । उमेरअनुुसार सन्तुलित खाना नभएमा विभिन्न रूपमा कुपोषणले सताउँछ । कुपोषण भन्नासाथ उमेर अनुसारको शारीरिक तौल, उचाइ वा शरीरका अङ्ग÷प्रणालीको स्वस्थकर अवस्था नहुनु हो । शरीरको तौल तथा उचाइ कम हुनु अल्पपोषणको चिन्ह हो भने उमेरभन्दा बढी तौल मोटोपनको सङ्केत हो । यसरी बढी वा कम हुनु कुपोषणको सूचक हो । कुपोषण भन्नाले शरीरलाई चाहिने क्यालोरी वा अन्य खानाको अभाव हुनु वा बढी हुुनु वा सन्तुलित नहुनु हो । कुपोषणमा मुख्यता दुई अवस्था पर्छन् । प्रथम होचोपन (उमेरअनुसारको उचाइ नहुनु÷कम हुनु, सुकेनास (उचाइअनुसार तौल नहुनु वा अल्पतौल (उमेरअनुसार तौल नहुनु), भिटामिनको अभाव हुनु (जस्तै रक्तअल्पता, आयोडिनको कमी हुनु) हो । दोस्रोमा बढी तौल हुनु, मोटापना तथा पोषणसँग सम्बन्धित अन्य नसर्ने रोग…
लमही, ३० जेठ । दाङको एउटै वडामा १३८ जना बालबालिका कुपोषित भएको भेटिएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का १३८ बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको हो । तीमध्ये ४७ जना बालबालिका मात्र सम्पर्कमा आएको र अन्य बालबालिकाहरु सम्पर्कमा नआएको स्वास्थ्य चौकी टरिगाउँका फोकल पर्सन रेणु केसीले जानकारी दिइन् । “हाम्रो वडा नं ११ मा १३८ जना बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ”, उनले भनिन्, “तर ४७ जना मात्रै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, अन्य बालबालिकाहरु कता हुनुहुन्छ, हामी कहाँ सम्पर्कमा आउनुभएको छैन ।” ४७ जनामध्ये निको भएका १३, डिफल्टर अर्थात् उपचार गर्दा गर्दै आउन छोडेका २२, अन्य अस्पतालमा थप उपचारका लागि पठाएका सात तथा औषधि खाइरहेका पाँच जनाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । २०७४ साल चैत ७ गतेदेखि २०७६ जेठ २७ गतेसम्मको शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ११ वटा वडामा कूल ६ हजार ९०८ जना बालबालिका रहेका स्वास्थ्य महाशाखा तुलसीपुरले जानकारी दिएको हो । एघार वटा वडाको केन्द्र टरिगाउँ केन्द्रमा अझै ९१ जना कुपोषित बालबालिका सम्पर्कमा…
तुलसीपुर १ जेठ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किशोरीका लागि ‘आइरन फोलिक एसिड’ खुवाउन शुरु गरेको छ । आइरनको कमीले किशोरीहरुमा रक्तअल्पता हुने भएकाले नियन्त्रण गर्न आइरन फोलिक एसिड खुवाउन शुरु गरिएको हो । उपमहानगरपालिका र बेस संस्थाको आयोजना एवं सु–आहारा कार्यक्रमको सहयोगमा उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै किशोरीलाई आइरन फोलिक एसिड खुवाउन शुरु गरिएको उपमहानगर स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा गोकर्ण दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपमहानगरभित्रका १० देखि १९ वर्षसम्मका सबै किशोरीलाई खुवाइनेछ । उपहानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्वास्थ्य विषयका शिक्षक–शिक्षिका, स्वास्थ्य सेवाका प्रमुखसँग समन्वय गरिएको प्रमुख डा दाहालको भनाइ छ । उहाँले विद्यालयभित्र र बाहिरका सबै किशोरीलाई खुवाउने उद्देश्य राखिएको बताउनुभयो । आइरन फोलिक एसिड विद्यालय जाने किशोरीलाई विद्यालयमा र विद्यालय नजाने किशोरीलाई समुदाय, वडा तथा स्वास्थ्य संस्थामा खुवाइनेछ । प्रमुख दाहालका अनुसार प्रत्येक किशोरीलाई ६० मिलिग्राम आइरन र चार सय मिलिग्राम फोलिक एसिड खुवाइनेछ । यही कार्यलाई १३ हप्तासम्म निरन्तरता दिइने बताइएको छ । दाङमा पहिलो पटक यो…
सुनौला हजार दिन’का आमालाई पाँच – पाँच वटा कुखुरा
डोटी, २४ वैशाख । जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभरिमा रहेका सुनौला हजार दिनका आमालाई कुखुरा वितरण गर्न थालेको छ । गाउँपालिकामा सुनौला हजार दिनका १८० आमालाई प्रतिव्यक्ति पाँच कुखुराका दरले अस्तोलोप र हेम्पसार जातका कुखुरा वितरण गरिन थालिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले बताइन । उनले भनिन्, “सुनौला हजार दिनका आमालाई सहयोग मिलोस् भनेर हामीले कुखुरा वितरण गर्न शुरु गरेका छौँ, आमालाई राम्रै सहयोग हुनेछ ।” गाउँपालिकाको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत छ वडाका सुनौला हजार दिनका आमालाई कुखुरा वितरण गरिन थालिएको हो । सुनौला हजार दिनका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य तथा पोषणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले अस्तोलोप र हेम्पसार जातका कुखुरा वितरण गरिन लागिएको निरौली स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्रमुख गोविन्द विष्टले जानकारी दिए । उनले भने, “गाउँपालिकामा भएका सुनौला हजार दिनका आमालाई कुखुराको अण्डा उत्पादन गरी स्वास्थ्य सुधार र कुपोषणको दर न्यूनीकरण हुने विश्वासमा कुखुरा वितरण कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।” उक्त गाउँपालिकामा बहुक्षेत्रीय पोषणका साथै कुखुरा वितरण, कुखुराको दाना र खोर सुधारका…
वीर अस्पतालमा खरिद अनियमितताः १ पैसामा अण्डा, चना प्रतिकिलो एक रुपैयाँ
काठमाडौं, १४ वैशाख । अहिलेको बजार भाउअनुसार एक पैसामा अण्डा किन्न पाइन्छ ? चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पताल खरिद इकाईले पत्याउनै नसकिने भाउमा खाद्यान्न खरिद गरेको भेटिएको छ  । अस्पतालले चिनी, बिस्कुट, तेललगायत खाद्य सामग्री एक रुपैयाँमा खरिद गरी बिरामीलाई खुवाइने खानाको गुणस्तरमै शंका उब्जाइदिएको छ  । अस्पतालले वैशाख १ गते रासन सामग्री खरिदका लागि न्यु सुयोग इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्वीकृत र्गयो । टेन्डरका लागि निवेदन दिने तीन फर्ममध्ये सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा सामान दिने सम्झौताअनुसार अस्पतालले सुयोगको टेन्डर स्वीकृत गरेको थियो । सस्तोमा दिए पनि सुयोगको योग्यता भने अस्पतालले तोकेअनुरुप थिएन । सुयोगले अस्पताललाई बुझाएको रासन परिणामसहितको मूल्यसूची हेर्दा पत्याउनै नसकिने छ । अहिलेको बजारभाउ अनुसार एउटा अण्डाको मूल्य १० देखि १२ रुपैयाँ पर्छ । सुयोगले अस्पताललाई प्रतिअण्डा एक पैसा तोकेको छ । चना प्रतिकिलो एक रुपैयाँ त्यस्तै जिरा, अदुवा ,बेसारको मूल्य पनि एकै रुपैयाँ तोकेको छ । तोरीको तेल प्रतिलिटर एकै रुपैयाँ छ भने नुन, गहुँको आँटा, चिनीको मूल्य पनि प्रतिकिलो १ रुपैयाँ नै छ । पत्याउनै नसकिने…
हामी जे खाँदैछौ त्यसैले मृत्यु निम्त्याइरहेछ
। संसारभरी जतिको मृत्यु हुन्छ, त्यसका लागि मुख्य कारण के होला ? धेरैले धुम्रपान भन्नुहोला, कसैले उच्च रक्तचाप पनि भन्नुहोला । तर होइन । संसारभर धेरैले ज्यान गुमाउने मुख्य कारण हो, कमजोर खान्की । ‘धेरैजसो देशमा धुम्रपान र उच्च रक्तचापले होइन, कमजोर खान्कीले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ,’ युनिभर्सिटी अफ वासिङ्टनको इन्सिटिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुएशनका सह–प्राध्यापक आस्कान आफ्सीनले भने । मानिसहरुले रातो मासु र चिनीयुक्त सोडालगायतका अस्वस्थकर खाना खाइरहेका कारण मात्र मृत्युदर बढिरहेको छैन । जर्नल ल्यान्सेटमा बुधबार प्रकाशित ग्लोबल डाइट एनालाइसिसका मुख्य लेखक आफ्सीनले यस्तो हुनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो खानपिनमा स्वस्थ खानेकुराको कमी र नुनको उच्च मात्रा भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘स्वस्थ खान्कीको बारेमा बहस हुँदा परम्परागतरुपमा अस्वस्थ खानेकुरालाई आफ्नो खान्कीमा समावेश नगर्ने भन्ने कुरा उठ्छ । यो अध्ययनमा भने हामीले धेरै मात्रामा अस्वस्थ खानेकुरा खानेभन्दा थोरैमात्रामा स्वस्थकर खाने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएका छौँ,’ उनले भने । सन् २०१७ मा संसारभरीका पाँच मृत्तकमध्ये एक…
शिक्षा मन्त्री पोखरेलले भेटे घाइते , उपचारको सबै खर्च सरकारले व्यहोर्ने
काठमाडौं, १८ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेर आइतबार राती बारा जिल्लामा आएको हावाहुरीबाट घाईते भएकाहरुलाई भेट गरेर सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अस्पताल महाराजगञ्ज ल्याइएका घाइतेलाई भेटेर मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए। उनले सबैं स्रोत साधन प्रयोग गरेर घाइतेको उपचार गर्न चिकित्सकलाई निर्देशन दिए । मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबैं सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। शिक्षण अस्पतालमा घाइतेहरु महमद मियाँ, गीतादेवी कट्टेल, समिना खातुन, अमन कट्टेल, मुनाफ अनसरी, कृष्ण पटेल र सुरेश पटेलको उपचार भइरहेको छ। आइतबार बेलुकी आएको हावाहुरीबाट घाइते भएकामध्ये ७ जनालाई उपचारका लागि सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
गलेश्वर, १७ चैत । पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडामा बालबालिकाको पोषणसम्बन्धी स्क्रिनिङ क्याम्प शुरु भएको छ । गाउँपालिकास्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिमार्फत मिलन म्याग्दी तथा सुआहारा कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा पोषण लेखाजोखासम्बन्धी क्याम्प सञ्चालन गरिएको हो । बच्चा जन्मिएको छ महीनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था पत्ता लगाउन स्क्रिनिङ क्याम्प आयोजना गरिएको धवलागिरि गाउँपालिकाले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रबार धवलागिरि–३ मुनामा कुपोषण पत्ता लगाउन २१ बच्चाको नापजाँच गरिएकामा सबै बालबालिकाको मध्यम अवस्था रहेको पाइएको सुआहाराका फिल्ड सुपरभाइजर चन्द्रकला बानियाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, धवलागिरिका अधिकांश वडामा बिहीबार र शुक्रबार कार्यक्रम गरिएको छ भने वडाभित्रका केही टोल बस्तीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसैगरी धवलागिरि–१ गुर्जामा भने आइतबार र सोमबार कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएका छन् । मुनामा सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा वडाका जनप्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, लक्षित समूहका महिला तथा बालबालिकालगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको अवसरमा पोषिलो खाना प्रदर्शनीसमेत गरिएको थियो । बच्चामा कुपोषण भए÷नभएको अवस्था पत्ता लगाइसकेपछि उसलाई पोषणयुक्त…
सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरहीन खाना खुवाइदै
नेपालगन्ज,चैत १७ । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुने बिरामीलाई गुणस्तरहीन खाना खुवाउएको खुलासा भएको छ । सरकारी अस्पतालले भर्ना भएका बिरामीलाई निःशुल्करूपमा खुवाउँदै आएको खाना खाए खा नखाए घिच’ भने झै गुणस्तरहीन खुवाउने गरेको खुलेको हो । यसले अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने खानाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारी निकायमा जताततै विकृति र विसंगति मौलाइरहेको बेला सरकारी अस्पताल जस्तो विश्वसनीय र संवेदनशील संस्थामै बिरामीलाई दिइने खाना गुणस्तरहीन हुँदासमेत अस्पताल व्यवस्थापन र खाद्यप्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालयले अनुगमनमा समेत चासो देखाएका छैनन् । बिरामी भएर निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जान नसक्ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार सरकारी खाना बहिस्कार गर्ने मनस्थितिमा समेत पुगेको भेरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीका आफन्तको भनाइ छ । पैसा खर्च गरेर अन्यत्र उपचारका लागि जान नसक्ने बिरामी दूषित खाद्यान्नको कारण थप बिरामीपर्ने स्थिति छ । अस्पतालमा वितरण हुने पानीसमेत दूषित भएको बिरामीका कुरूवाको आरोप छ । बिरामीलाई निःशुल्क खुवाइने खानाको गुणस्तरबारे सरोकारवाला निकायको अनुगमन नहुँदा गुणस्तरहीन खाना खान…